#Real Madrid oo Shaacisay xilliga ay soo bandhigayso Rodrygo Goes - Get Latest News From Horn of Africa
#Real Madrid oo Shaacisay xilliga ay soo bandhigayso Rodrygo Goes
By WARIYAHA CAALAMKA On Jun 18, 2019 Last updated Jun 18, 2019
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa shaacisay xilliga ay soo bandhigayso xiddigeeda Rodrygo Goes.
Magaciisa oo buuxa waa Rodrygo Silva de Goes, waxaana loo yaqaan Rodrygo, waa ciyaaryahan reer Brazil ah oo weerarka ka dheela, waxaana Real Madrid ay ka soo qaadatay naadiga Santos.
18-sano jirkaan ayay kooxda Los Blancos xaqiijisay inay maanta oo Talaado ah ku soo bandhigayso garoonka Santiago Bernabeu marka ay saacadda dalka Spain tahay 01:00 duhurnimo.
#Georginio Wijnaldum“Wax cadaadis nama saarna tani waa…
#Sadio Mané ayaa ku faraxsan Liverpool lakiin waxa uu…
Warbixinta ay kooxda Real Madrid ku xaqiijisay soo bandhigista Rodrygo Goes oo lagu daabacay website-keeda rasmiga ah ayaa u dhignaa: “Ciyaaryahanka Rodrygo Goes waxaa la soo bandhigi doonaa berrito oo Talaado ah oo ay taariikhdu tahay 18 bisha June, saacaduna tahay 1:00 duhurnnimo.”
“Waxaana lagu soo bandnigi doonaa garoonka Santiago Bernabéu.”
“Rodrygo ayaa markaasi kaddib ka soo muuqan doona oo ku dhex socon doona garoonka Santiago Bernabeu markii ugu horeysay isagoo xiran maaliyadda Real Madrid, waxaana uu warbaahinta kula hadli doonaa qol Saxaafadeedka.”
3 hours ago 233,703
Jul 15, 2019 125,892